Nepal: Mbola tsy manana mpitarika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Jona 2018 4:21 GMT
Iray volana mahery taorian'ny fametraham-pialan'ny praiminisitra Madhav Kumar Nepal, mbola tsy manana mpitarika ny Repoblika Demaokratika Federalin'i Nepal. Tsy nahavita nanome mpandresy mazava ny fifidianana in'efatra mihodina, misy ny fifidianana faha-dimy ho atao amin'ny 18 aogositra 2010.
Voatsikera be nandritra ny fotoana niasany i Sharan, ambasadaoro Indiana taloha tany Nepal noho izy voalaza fa nitsabaka ny raharaham-pirenena ary nihoatra ny fefy ara-diplaomatika. Ankehitriny satria nandefa azy ho any Kathmandu tahaka an’ “Atoa. Fixit” (Atoa Alamino io) i New Delhi, dia nahita bala hanakanana izay tolo-kevitra avy amin'ny Kongresy Nepaley sy ny Antoko Komonista (Marxista sy Leninista Mitambatra) – izay heverina ho mankasitraka ny fitsidihan'i Sharan ny Maôista sy ireo nasionalista elatra havanana.
Manontany ihany koa ireo bilaogera raha afaka mandefa iraka i India mba hiresaka momba ny raharaha anatiny saro-pady ao Nepal, kanefa tsy nasaina akory. Ao amin'ny bilaogy amin'ny teny Nepaley MySansar, hoy i Deepak hoe:
Niresaka momba ny toe-draharaha ihany koa ireo mpomba ny mpanjaka ary mitaky ny hamerenana indray ny Fitondram-panjaka mba hiadiana amin'ny fitsabahan'ny Indiana sy ny heriny. Anil Bhakta Kharel ao amin'ny bilaogy Hamro milaza fa izao no fotoana hamerenana indray ny fitondram-panjaka izay farafaharatsiny niezaka nanohitra ny hery avy any ivelany: